कम्युनिष्ट सांसदहरुकाे विराेधका बावजुद प्रदेश नं २ काे सरकारले गर्‍याे यस्ताे क्रान्तिकारी निर्णय, अाेलीलार्इ लाग्याे ठुलाे झट्का! -
कम्युनिष्ट सांसदहरुकाे विराेधका बावजुद प्रदेश नं २ काे सरकारले गर्‍याे यस्ताे क्रान्तिकारी निर्णय, अाेलीलार्इ लाग्याे ठुलाे झट्का!
२८ आश्विन २०७५, आईतवार ०८:३८ 1778 पटक हेरिएको
जनकपुरधाम, । प्रदेश नं २ मा शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले ‘प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७५’ दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेश नं २ लार्इ अब आफ्नो प्रहरी संगठन निर्माण गर्न कुनै राेकटाेक हुने छैन्। उक्त विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि अब प्रदेशले आफ्नै प्रहरी संगठन राख्ने ढोका पूर्ण रुपमा खुलेको छ ।
संघीय सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पटकपटक प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिदै आएका थिए ।
संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइरहेको भन्दै आरोप लागेको बेला प्रदेश २ ले एक कदम अघि बढेर निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले देशभरिका प्रहरी परिचालन गर्ने गरी नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने बताउदै आएको थियो ।
सरकारले नै संघीयताको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न नचाहेको आरोप लाग्दै आएको बेला प्रदेश २ को यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी विधेयक बहुमतले पारित भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने विरोध जनाएको छ । यता नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने समर्थन गरेको छ ।